Rohingya Students Forum: Béçar Sónnat Ballúkkia
Béçar Sónnat Ballúkkia
Ugguá bállukefarar hañsar murát berár. Te ekkán merit foijja soolor sam dikké. Ossé aññí zodi samgán berái soolor zak ót gólirde óile sool soroinná fua ye moré forók gorí nofaríbou. Raitya aññí ebbe bódha sool gua mari loizai goi faijjum” bouli hoi báiffe.
A wolf was walking in the countryside. He foundasheep-skin spread on the ground. He thought, "If I wear this skin and get mixed up in the flock, the shepherd will not suspect me. At night, I will killastout sheep and then take him away with me".
၀ံပု​လွေတစ်​​ကောင်​ဟာ ​တောအရပ်​​ကျေးလက်​​ဒေသမှာ သွားလာနေခဲ့တယ်​။ ​မြေ​ပေါ်​မှာ သိုး​အရေခွံတစ်​ခု ကျ​နေတာကို ​တွေ့ခဲ့တယ်​။ သူက " ဒီ​အ​ရေခွံကို ခြုံပြီး သိုးအုပ်​ထဲ ၀င်​​ရောလိုက်​ရင်​ သိုး​ထိန်းက ငါ့ကို သံသယဖြစ်​မှာမဟုတ်​ဘူး။ ည​ရောက်​ရင်​ ၀ဖိုင့်​ဖိုင့်​သိုးတစ်​​ကောင်​ကို သတ်​ပြီး အ​ဝေးသယ်​သွားမယ်​" လို့ ​တွေးလိုက်​တယ်​။
Toilé, bálluketargaat mazé soolor sammán berái óre soolor zak ót góille gói. Tar báfa mozin ode ode óiye. Sool soroinna fua wá yé taré ót gorí noó faáre. Bálluk oré coó dhiñyai loizai soolor açailot gólai duwar gán bongorí féillé. Bállukerait ói bollá soiñgorí táikke.
၀ံပု​လွေဟာ သူ့ကိုယ်​သူ သိုးအ​ရေခွံကို ခြုံပြီး သိုးအုပ်​ထဲ ၀င်​​ရောလိုက်​တယ်​။ သူ ​မျှော်​လင့်​ထားတဲ့အတိုင်း သိုး​ထိန်းဟာ သိုးအဖြစ်​နဲ့ ​ခေါ်သွားပြီး သူ့ကိုလည်း သိုးခြံထဲ ပိတ်​ထားခဲ့တယ်​။ ၀ံပု​လွေဟာ ည​အချိန်​​ရောက်​လာဖို့ ​စောင့်​​နေခဲ့တယ်​။
Soólor girós é raitta fua bát hár. Soijja fua ugguá diferái óre ugguá sool dorát diyé. Tar sugót Béça soolor béddoijjé dé bállúk gwa sugót foijjé. Adá raitta bálluk gwa ré zorgorái hái feillé.
သိုး​ထိန်းက အဲ့ညမှာ ​ပျော်​ပွဲရွှင်​ပွဲ စားပွဲ​ကျင်းပတယ်​။ သူဟာ အ​စေခံတစ်​​ယောက်​ကို ​၀ဖိုင့်​ဖိုင့်​ သိုးတစ်​​ကောင်​ သွားဆွဲခိုင်းခဲ့တယ်​။ အ​စေခံဟာ သိုး​အ​ရေခြုံထားတဲ့ ၀ံပု​လွေကို အ​ကြောင်းတိုက်​ဆိုင်​စွာ ​မြင်​ခဲ့တယ်​။ အဲဒီညမှာ ဧည့်​သည်​​တွေဟာ ညလယ်​စာအတွက်​ ၀ံပု​လွေကို စား​သောက်​ခဲ့ကြပါ​တော့တယ်​။
Sóbok: Hóraf báfilé Hóraf loi fúra.
"မ​ကောင်းတာကြံရင်​ မ​ကောင်းတာနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်​ရတယ်​။"
Posted by Rohang king at 8:59 AM
Labels: Aesop's Fable, Rohingyalish, Story, اردو
ရှေးစကား ရွှေအလား- ၁ [Old is Gold]
Baró Maic (The Twelve Months)
Nizor Fosón Saái-saái Gorón
Some Educational Subjects Names in Rohingya Zuban
ဆုဖြူ [RK Poem]